Angel Di Maria oo shaaca ka qaaday inuu iska diiday xirashada lambarka 7-aad ee Kooxda Man United & Lambarkii uu markaas ka dalbaday! – Gool FM
(Paris) 05 Feb 2020. Ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta PSG iyo xulka qaranka Argentine ee Angel Di Maria ayaa si cad u sheegay inuu iska diiday xirashada lambarka 7-aad ee kooxda Manchester United waqtigii uu kaga soo biiray naadiga Real Madrid sandkii 2014-kii.
Lambarka 7-aad ee Kooxda Manchester United, waxaa soo xirtay halyeeyo waa weyn oo kooxda soo maray, muhiimna u noqday xilligoodii sida Eric Cantona, David Beckham iyo ninka shanta jeer ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu wanaagsan adduunka ee Cristiano Ronaldo.
Angel Di Maria ayaa la waydiiyay sababtii uu u qaadan waayay lambarka todobaad ee Kooxda Manchester United waqtigii uu ku biiray, waxaana uu ninka reer Argentine u sheegay Website-ka rasmiga ah ee Ligue 1 sirta ka dambeysay inuu iska diiday xirashada lambarka 7-aad.
Angel Di Maria oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri: “Ma garanayo dhab ahaan markii aan tagay Manchester United waxaan arkay lambarka 11 oo bannaan (aan la xiran).”
Di Maria ayaa hadalkiisa ku sii daray: “Lambarka 11-aad waa lambar aan xiran jiray wax badan, markii aan yaraa waxaana jeclaa in aan u xirto Real Madrid inkastoo lambarka 11-aad uu ahaaa mid horay loo qaatay ayaan door-biday xirashadda lambarka 22-aad, Manchester United ayaa i siisay lambarka 7-aad, ma dooran anigu, waxaana jecleystay lambarka 11-aad, xitaa PSG waxaan ikhtiyaar u helay doorashada lambarro badan, sidaas darteed waxaan doortay lambarka 11-aad.”
31-sano jirka garabka ka ciyaara ayaa hal xilli ciyaareed ku qaatay garoonka Old Trafford intii uu macallin u ahaa Louis van Gaal ka hor inta uusan u dhaqaaqin Kooxdiisa haatan uu ka tirsan yahay ee Paris Saint-Germain.
Di Maria ayaa dhaliyay afar gool 32 kulan uu saftay intii uu joogay Man United, iyadoo Man United ay ku dhammeysatay kaalinta afaraad ee Premier League xilli ciyaareedkaas.